Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Mudaharaad ka dhacay Muqdisho kala diray -
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Mudaharaad ka dhacay Muqdisho kala diray
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa soo dhexgalay Mudaaharaadyaashii bajaajleyda ee ku banaan baxayay isgoyska Nambar Afar ee Magaalada Muqdisho iyo ciidamada oo rasaas ladhacayay mudharaadiyaasha.
Gudoomiye Taabit ayaa isga oo gaari dusha ka saaran dhexgalay darawaldii banaan baxyada waday isaga oo ugu baaqay in ay xaaladu dejiyaan.
Mudaaaharaadyaasha ayaa bur buriyay gaari ay leeyihiin Ciidamada Amisom iyago oo dab qabadsiiyay waxa ayna ka careeysnaayeen kadib markii laga joojiyay isticmaalka wadooyinka qaar ee Magaalda Muqdisho.
yinka la yiri ma mari kartaan, wuxuuna ka dalbaday in ay Ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan amniga caasimadda.
Xaalada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay tahay mid aad u kacsan, waxaana guryahooda ku hakaday dad fara badan oo shaqooyin kala duwan u soo aadi lahaa magaalada, maadaama Banaanbaxa uu bilowday aroortii hore ee saakay.
Related Items:Featured, Mogadishu
Mudaharaad Rabshado wata oo Maanta ka dhacay Muqdisho
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo Kanbaala ku shiray